कोरियामा पहिलोपटक कोरोना सङ्क्रमण देखिएर निको भएकी महिलालाई पुन: सङ्क्रमण भेटियो !
दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या तिव्ररुपमा बद्धी भइरहेको बेला पहिलो पटक निको भएका एक महिलामा पुनः संक्रमन देखिएको छ । ७३ वर्षिय महिलामा दोस्रो पटक कोरोना संक्रमण भेटिएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले शनिबार पुष्टी गरेका छन् ।
रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रका अनुसार उनी फेब्रवरी २२ तारिख पुर्ण निको भई घर फर्केका थिए । विहिबार उनमा पुनः भाइरसको लक्षण देखा परेको थियो ।यस अवधिमा उनी कतै विदेश नगए पनि उनका छोरा र बुहारी चिनको ग्वागंदोइं प्रान्तमा पुगेर आएका थिए । छोरा बुहारी दुवै जना भाइरस संक्रमित भइसकेका थिए । स्थानिय स्वस्थ्य कोन्द्रका अनुसार सो अवधिमा घरबाट बाहिर नसिस्केको ति महिलाले दावी गरेकी छिन् ।
कोरियामा पछिल्लो तथ्यंक अनुसार संक्रमितको संख्या ५९४ थपिएर २९३१ पुगेको छ । थेगुमा आज मात्रै संक्रमणको सम्भावामा घरमै रहेका एक बृद्धाको मृत्यु भएको छ । मृत्युपछि जाँच गर्दा भाइरस संक्रमित भएको पुष्टी भएको थियो । थेगुमा संक्रमितको संख्या अझ धेरै थपिने चेतावनी स्वस्थ्यकर्मीले दिएका दिएको न्युज ऐजेन्सीले जनाएको छ ।
कोरोना कहर ! के भन्छन् कोरियाका नेपाली ?
कोरियामा रहेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्ने सरकारको योजना छैन,